Enye Imbukiso Yezokuhweba Ekhombisa Indawo | I-China Other Trade Show Ekhombisa Abenzi nabahlinzeki
Ithebula Eliphezulu Lesibhengezo litholakala ngezinketho ezingu-6 'no-8' ngokuboniswa kwesibhengezo setafula ngokwezifiso. I-logo yakho nemidwebo yakho iphrintwe kubhanji wendwangu eyeluliwe ephrinte imidwebo yakho ngombala ogqamile futhi idonsa ukunaka kwabantu.
I-Rollup ingenye yezindlela ezilula kakhulu namathuluzi wokubonisa asetshenziswa kakhulu kuyo yonke imikhiqizo yokuphromotha. Kuhle kakhulu ukuxhumana nemiyalezo noma imikhiqizo yezentengiso. I-CFM inikela ngezinhlobo ezimbili zama-rollups ongakhetha kukho, uhlobo olujwayelekile kanye ne-premium eyodwa. Ihluzo ungqimba olulodwa.
Uma ufuna ukuthola ezinye izinto ezingakhombisi kahle inkampani yakho noma imikhiqizo, kepha futhi zisebenze futhi zisebenze, idokodo lokuzivelela kumele libe yisinqumo esihle. Ngaphezulu okuyisicaba, idokodo lokuzigaxela lingasetshenziswa njengeshalofu lokukhombisa umkhiqizo futhi lingasetshenziswa njenge-rostrum. Ngaphezulu, ungaphrinta izithombe, iziqubulo kanye nemikhiqizo njengoba uthanda.